ဆူးလေဘုရားသည် ဘယ်နေရာတွင် တည်ရှိနေသနည်း။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဆူးလေဘုရားသည် ဘယ်နေရာတွင် တည်ရှိနေသနည်း။
ဆူးလေဘုရားသည် ဘယ်နေရာတွင် တည်ရှိနေသနည်း။
Posted by manawphyulay on Sep 12, 2010 in Creative Writing, Drama, Essays.. |9comments
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထင်ရှားသော စေတီပုထိုးများစွာ အနက်မှ ဆူးလေဘုရားလည်း တစ်ဆူ အပါအဝင်ဖြစ်တယ်။ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အလယ်ဗဟိုမှာ တည်ရှိတယ်လေ။ ဆူးလေစေတီတော်ကို မဏ္ဍိုင်ပြုပြီး အရှေ့ဘက်မှ
အနောက်ဘက်သို့ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် တောင်ဘက်မှ မြောက်ဘက်သို့ စေတီတော်ဘွဲ့အမည်ကို အစွဲပြုပြီ ခေါ်တွင်တယ်လို့ သိရတာပါပဲ။ ဆူးလေဘုရားလမ်းတဲ့ သတ်မှတ်ထားတာတဲ့။ ဆူးလေဘုရား အရှေ့မြောက်ထောင့် မှာတော့ မြို့တော်ခန်းမကို တည်ဆောက်ထားတာကို တွေ့ရတယ်။ ဘယ်လိုလဲ။ မြန်မာပြည်မှာ ဟိုတုန်းကတည်းက စိတ်ကူးကောင်းတဲ့ သူတွေ ရှိခဲ့တာဘဲနော်။ ဒါတောင် သူ့ကျွန်ဘဝရောက်ခဲ့ရသေးတယ်။ ပြန်စဉ်းစားကြည့်မိရင် မတွေးဝံ့စရာဘဲ။ တော်သေးတယ်။ လူဖြစ်တာ နောက်ကျလို့။ အင်း ဆက်ပြောရဦးမယ်။ အရှေ့တောင်ထောင့်မှာတော့ လွတ်လပ်ရေးကျောက်တိုင် စိုက်ထူထားတာတွေ့ ရတယ်လေ။ ဗန္ဓုလပန်းခြံနှင့် တရားလွတ်တော်ချုပ် တို့လည်း အခု ဘားလမ်းလို့ခေါ်တဲ့ ဘက်မှာ တွေ့ရတယ်။ ဟုတ်လားဟင်။ မိတ်ဆွေကော အဲဒီနေရာ ရောက်ရင် သတိထားမိလား။ ဆူးလေဘုရားဟာ ရွေတိဂုံဘုရားကနေ ၉၂၇၅ ပေလောက် ကွာဝေးတယ်တဲ့။ ယမင်းတော့ တိုင်းမကြည့်ဘူးပါဘူး။ စာအုပ်ထဲမှာ ဖတ်ဖူးတာ။ အဲ ဗိုလ်တစ်ထောင်ဘုရားနဲ့လည်း ၅၁၀၂ ပေခန့် ကွာဝေးသေးတယ်။ မယုံရင် အချိန်ရရင် ဒါမှမဟုတ်ရင် ဆူးလေဘုရားနားရောက်ရင် ပေတိုင်း ကြည့်ပေါ့နော်။ ခန့်မှန်းတာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်။ မြို့တော်ခန်းမဘေးမှာတော့ စည်ပင်ရုံးလည်းရှိသေးတယ်။ ဪ ပြောဖို့ မေ့သွားလို့ ယမင်းက ကော်ဖီကြိုက်တော့ အဲဒီနားရောက်ရင် လက်ရွေးစင်မှာ ကော်ဖီဝင်သောက်သေးတယ်။
သူ့ကျွန်ဘဝရောက်မှာပေါ့ဗျ၊ ဆူးလေးဘုရားကို ဗဟိုပြုပြီး ရန်ကုန်မြို့ကွက် တည်သွားခဲ့တာ အင်္ဂလိပ်တွေပဲဟာ။
၁) ၁၇၅၅ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင် ပြည်မြို့သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထိုနှစ် မေလတွင် မွန် တံငါရွာငယ် တစ်ခုဖြစ်သော ဒဂုံသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
၂)ပြင်သစ်သင်္ဘောများ ရပ်တန့်ကာ အမြောက်များဖြင့် ပစ်ခတ်ကြသော အချိန်တွင် မွန်တို့ကလည်း မြန်မာလှေများကို သေနတ်များဖြင့် ပစ်ခတ်လေတော့သည်။ မြန်မာလှေငယ်များကား ဆူးလေဘုရား အနီးသို့တိုင် ပောက်ရောက်သော ချောင်းငယ်လေး တစ်ခု အတွင်းသို့ ဆုတ်ခွာကြရလေသည်။
ဒဂုံဆိုတာ..အခုရန်ကုန်မြို ့ပဲ.။ အဲဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၂၅ဝလောက်ကတော့ ဆုးလှေဘုရားနားမှာ ချောင်းတခုရှိပုံပေါ်တယ်..။
နောက်ပိုင်း ..မြန်မာပြည်ကိုအင်္ဂလိပ်သိမ်းတော့…ရန်ကုန်မြို ့ကွက်ကိုု အင်္ဂလိပ်တည်တာပါ။
တကယ်တော့..ရန်ကုန်ဟာ..မြေပျော့ပေါ်မှာတည်ထားတာအပြင်..မြစ်တွေနဲ့ဘောင်ပိတ်ထားသလိုဖြစ်နေတာမို ့…. ၂၁ရာစုရဲ့မက်ဂါမြို ့ကြီးဖြစ်လာဖို့အလားအလာ နည်းပါတယ်..။ မြေကလည်းတောင်ဖက်ကို တနှစ်လက်မအနည်းငယ်လောက်ပြိုကျနေတယ်..မှတ်ဖူးပါတယ်..။ မိလ်လာ၊ရေဆိုးစံနစ်ကလည်း..မြို့လူဦးရေနဲ့ မမျှနိုင်အောင်ပါပဲ..။ မမျှတတဲ့ လူဦးရေပမာဏကို..ရေအရင်းအမြစ်ဖြည့်နိုင်ဖို့…အဝီစိတွင်းတွေတူးကြတာကြောင့်..မြို့ဟာ.. အောက်ကိုလည်း..နိမ့်ကျနေဖို့ရှိပါတယ်..။
တကယ်လို့မြေဝယ်ချင်ရင်..မြို ့ရဲ့မြောက်ဖက်ပိုင်းနဲ့ တဖက်ကမ်း..ဒလကိုဦးစားပေးစဉ်းစားးသင့်တယ်..။
နောက်ဘယ်လိုမှန်းမသိသေးပေမဲ့ ဒလမှာတော့ဘာမြေမှမဝယ်ချင်ပါဘူး ။ ရမ်းကားဆိုးသွမ်းတဲ့လူတွေများလို့ … ။
ဒလဘက်မှာ မြေဝယ်ရင်တော့ ကြုံရမဲ့ အခက်အခဲကတော့ ရေပြသနာဘဲ ဒလ မှာ ရေကောင်းမရှိလို့ တွံတေးကနေ ပိုက်လိုင်းကြီးနဲ့ သွယ်ယူရပါတယ် အမြဲတမ်း ရေရှားပါးနေတဲ့ အတွက် ဒလဘက်ကတော့ လက်ရှိအနေအထားမှာ အဆင်မပြေပါဘူး ရေတွင်းအကုန်လုံး နီးပါး သိသလောက်ကတော့ ရေငန်ဘဲ ထွက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အခေါ်ကတော့ ဆူးလေဘုရားက ကပ်ကျော်ဘုရားတဲ့၊ ကပ် (၃) ပါးကျော်လို့တော့ မဟုတ်ဘူး၊ မြို့ထဲကိုသွားတိုင်း ဆူးလေဘုရားနားက ဖြတ်ဖြတ်ပြီးသွားရတာ၊ ဘုရားပေါ်ကို ရောက်တဲ့အကြိမ်က အတော့်ကိုနည်းတယ်၊ အနားတင် ကပ်ကပ်ပြီး ကျော်ကျော်သွားကြလို့ ကပ်ကျော်ဘုရားလို့ တောင် ပြောစမှတ်တွင်နေသေးတယ်….
ဟုတ်တယ် …ဒလမှာတော ့ရေတွေဝယ်သုံးနေရတာတော ့သိတယ်…အဝီစိတွင်းတူးတဲ ့ရေတွေကလည်းအဝါရောင်တွေလို ့ပြောကြတယ်
ဆူးလေဘုရားကတော ့နေ ့တိုင် းဖူးနေရပါတယ်……
ဟုတ်ကဲ့ ရန်ကုန်ရောက်တာ သုံးနှစ်ပြည့်ပါတော့မယ် ဆူးလေဘုရားပေါ်ကို ၃ ခေါက်လောက်ပဲရောက်သေးတယ်… ကားပေါ်ကနေပဲ လက်အုပ်ချီဖူးနေရတယ်…
သောက်ရေးထဲ ယမင်းကော်ဖီကြိုက်တာထည့် ပြောနေသေး
လာခဲ့ချည်….တိုက်ပလိုက်မယ်…ဒူးနဲ့ ( ဟီးဟီးဟိ)အဟွတ် အဟွတ်
သူ့ကျွန်ဘဝ ကိုခံခဲ့ရဖူးတဲ့သူတွေကိုသနားမိတယ် ။ ။ ။